Xabsiga Qasriga Ah Ee Amiirada Sucuudiga | WAJAALE NEWS
Xabsiga Qasriga Ah Ee Amiirada Sucuudiga
November 27, 2017 - Written by Reporter:
RIYADH,(W,N)-Hoteelka Ritz Carlton ee magaalada Riyadh oo ahaa mid ka mid ah hoteelada ugu raaxada badan ee heerka boqortooyo ayaa waxa hadda loo badalay xabsi lagu hayo boqolaal shaqsiyaad isugu jira amiiro boqortooyada ka tirsan iyo ganacsato caan ah.
Illaa 200 boqol oo amiiro iyo ganacsato ah ayaa goobtan lagu hayaa, kadib go’aan uu gaadhay dhaxalsugaha boqortooyada Sucuudiga Maxamed Binu Salmaan, kaas oo sheegay in uu la dagaalamayo musuqmaasuqa.
Markii dadka meeshan ku jiray lasoo xidhayay ma ahayn kuwa faraxsan, aad ayayna uga xumaadeen markii si qasab ah meesha lagu soo galiyay, sidaas waxaa noo sheegay nin sheegtay in uu ka mid yahay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa.Waxaa meesha ku sugan mas’uul ka suga xafiiska dacwad oogaha guud iyo wax lagu sheegay ururka xuquuqul insaanka madaxa banaan, waxa ay xog naga siinayaan waxa meesha ka jira, balse shuruudda waxa ay tahay in aanan qofna magaciisa xiganin.
Waxaan weeydiinay sababta halkan loogu soo xidhay dadka, jawaabtuna waxa ay ahayd “Waxaan ka cabsanay in qaarkood ay baxsadaan, sidaas darteed ayaan gudaha usoo galinay” ayaa nalagu yidhi.
Amiir Mitab Binu Cabdullaahi oo dhaxalsugaha ay ilmo adeer yihiin ayaa ka mid ah kuwa meesha ku xidhan, mar ayuu madax ka ahaa ciidammada illaalada dalka.
Xadhigga raggan heerka sare ah ayaa waxa ay keentay in loo fasirto in ay tahay mid ku saabsan dagaal siyaasadeed iyo loolan ka dhaxeeya boqortooyada.
Labadii sano ee lasoo dhaafay, koox uu magacaabay dhaxalsugaha ayaa waxa ay uruurinayeen cadeymo la xidhiidha fal dambiyeedyo musuqmaasuq ah, kooxdana waxa ay ku hawlgalaysay si hoose oo aysan cidna dareemaynin. Cadaymaha qaarkood ay hayaan waxa ay la xidhiidhaan kuwa tobonaan ka sano ka hor ah.Markii digreeto boqor lagu magacaabay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, waxa ay markiiba qaadeen talaabooyinkooda.
Su’aalaha ku saabsan sharciyadda loo maray talaabada dadka lagu soo xidhdhiray ayaa waxaa jawaab lagaaga dhigayaa in xafiiska dacwad oogaha uu yahay mid madax banaan.
Garsoorka Sucuudiga waxa ay kuu sheegayaan in waxa socda ay yihiin baadhitaano horudhac ah oo kaliya, islamarkaasna dadka la weeydiinayo in ay soo celiyaan lacagihii ay xadeen.
“Waa nidaam sahlan, qofka waxaan tusaynaa cadaymaha aan ka heyno, waxaanan weeydiinaynaa in uu soo celiyo lacagtii uu dhacay” ayuu yidhi sarkaalka ka socda xafiiska dacwad oogaha guud.
Hoteelka waxaa ku xidhan illaa 201 qof, intooda badana waxa ay doonayaan in arrintan xal loo helo, meeshana ay ka baxaan.
Waxaa hawsha socota ka qeybqaadaya khubaro ka tirsan wasaaradaha dowladda, sida maaliyadda, bangiyada, iyo caddaalada, kuwaas oo shaqada ku jira 24 saac si ay u fududeeyaan baadhitaanka iyo xal u helista mashaakilka taagan.
Illaa 4% dadka meesha ku xidhan ayaa ku adkaysanaya in dacwadooda ay la tagayaan illaa heer maxkamad, balse 95% inta soo hadhay waxa ay diyaar u yihiin in ay heshiis galaan, lacagta loo heystana ay ku shubaan bangiga dhexe ee Sucuudiga.
Waxaa jira warar ka hadlaya in lacagaha la xaday ay gaadhayaan 800 bilyan oo doolar, balse markii aan arrintaas wax ka weeydiinay saraakiishii aan kula kulanay Hotel Ritza Carlton ayaa waxa ay ku jawaabeen “xitaa haddii aan ka helo $200 bilyan, waa wax fiican”.
Sarkaalkan oo ka tirsan guddiga baadhitaanka ee gaarka ah ayaa waxa uu tusaale usoo qaatay koob qaxwe ah oo uu cabayay “hadda koobkan qiimihiisa dhabta ah waa $10 doolar, balse waxaa laga dhigay $100 doolar”, wuxuu sidoo kale tusaale usoo qaatay dhismooyin qabyo ah oo iskuulaad iyo Cisbitaalo ah kuwaas oo qarashka ku kacaya laga dhigay boqol milyan oo doolar, balse kharashka rasmiga ah uu kaas aad uga yaryahay.
Ma ahan wax adag in aad dareento cadhada iyo niyad jabka meeshan ka jira.
Jidhiska iyo madadaalada sida heesaha iyo muusiga ayaa loo ogolyahay dadka meeshan ku xidhan.
Si kastaba ha ahaatee meeshani waa xabsi, balse ma aha xabsiyadii caadiga ahaa ee dadka lagu ciqaabayay, dadka ku xidhana waxa ay heystaan wax kasta oo lagu raaxaysto , laguna faakideysto.